त्रिपिटक भनेको के हो ? - हिमगाथान्यूज
Home धर्म दर्शन त्रिपिटक भनेको के हो ?
भगवान बुद्धले आफ्नो उपदेशलाई त्यस समयको साधरण भाषा भईराखेको पाली भाषाबाट बुझ्न सजिलो भएकोले प्रचार-प्रसार गर्नुभयो । सुर्यको किरण झै वहाँको उपदेश सबैलाई समान रुपले प्राप्त भयो । भगवानको महापरिनिर्बाण भइसकेपछी कास्यप, आनन्द आदि वहाँका मुख्य मुख्य सिस्यहरुले राजगृहमा बुद्धबचनको संगायन गर्नुभयो ।
धर्म तथा बिनयको संग्रह गर्नुभयो । १०० वर्षपछि स्थबिरहरुले दोस्रो संगिती गर्नुभयो, यश सभा बैसालिमा सम्पन्न भएको थियो । यश सभामा ७०० जना अर्हत भिक्षुहरु सम्मिलित हुनु भएको थियो । असोक महाराजाको पालामा आचार्य मौदगाली पुत्रको प्रधानत्वमा पाटलिपुत्रमा तेस्रो सांगिती भयो । आजसम्म प्राप्त भैइसकेको त्रिपिटकका रुप यश प्रकारको रहेको छ ।
त्रिपिटक: (क) सुत्तपिटक:- (१) दिघनिकाय (२) मज्झिमनिकाय (३) संयुक्तनिकाय (४) अंगुत्तरनिकाय (५) खुद्दकनिकाय (खुद्दकपाठ पाली -धम्मपद पाली -उदान पाली (इत्तिबुतक पाली -सुत्तनिपात पाली
(बिमानबत्थु पाली -पेतबत्थु पाली -थेरगाथा पाली -थेरिगाथा पाली -जातक पाली -निद्देस पाली (महानिद्देस, चुल्लनिद्देस ) -पटिसम्भिदा मग्ग पाली -अपदान पाली -बुद्धवंस पाली -चारिया पिटक पाली
(ख) बिनय पिटक:- (१) पाराजिका पाली (भिक्खुबिभङ) (२) पाचित्तिय पाली (३) महाबग्ग (४) चुलबग्ग (५) परिवार पाली (ग) अभिधम्मपिटक (१) धम्मसङणि (२) बिभङ (३) कथावत्थु (४) पुग्गलपञ्ञ्चती (५) धातुकथा (६) यमक (७) पट्टान
बिनय शब्दको अर्थ ठाँउ हेरि, विषय हेरि विभिन्न पुस्तकमा विभिन्न प्रकारले दिईएको भएतापनी ती सबैको एउटै लक्ष्यतिर निर्दृस्ट भईराखेको पाइन्छ । यसको साधरण अर्थ:- बिनित हुन जान्नु, सिस्ट हुन सम्पन्न हुन जान्नु, संयमित हुन जान्नु हो । इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु, नियम पालन गर्नु, सिक्षित हुन जान्नु, विशेष निर्दिस्ट ठाँउमा जानू तथा नराम्रो बाटोलाई त्यागी राम्रो बाटोमा लाग्नु आदि हो ।
बिनय शब्द “नय” – “गति रक्खो” भन्ने भुवादी धातु शब्दले बनेको हो भनेता पनि सिंहल बिनयकोषबाट “नि” – “नये पापुणने” भन्ने भुवादी शब्दबाट बनेको हो भनेर भनिन्छ ।
दण्डद्वारा दमन नगरीकन धर्मपुर्बक अर्थात क्षान्ती र मैत्रीपुर्बक दमन गर्नुलाई पनि “बिनय” भनिन्छ । “धर्म र बिनय” लाई ग्रन्थको हिसाबले हेर्दा बिनयपिटक एक बाहेक अरु सबै पिटकलाई “धर्म” भनिन्छ । बिनयपिटक एउटालाई मात्रै “बिनय” भनिन्छ ।
संक्षेपमा बिनयलाई …(क) संवर – बिनय र (ख) प्रहाण – बिनय भनेर भनिन्छ । (क) संवर-बिनय भनेको संयम गर्ने बिनय, नियम हो । (ख) प्रहाण-बिनय भनेको त्याग गर्नुपर्ने बिनय, नियम हो ।
बिनयपिटक भनेको के हो ?
(क) संघको लागि अनुशासनात्मक तथा कायिक नियमहरु:-
बुद्धसासनमा भिक्षुहरु तथा भिक्षुणिहरुको रूपमा प्रवेश गरेका बुद्धका सिस्यहरुलाई (अनुयायीहरु ) उनीहरुको आचरण ब्यबस्थित गर्नको लागि बनेको अनुसासनका नियमहरुलाई बिनय भनिन्छ । यी नियमहरुले सारिरिक र बाचिक दुबै कार्यहरूको निरोध र आचरणको प्रक्रियामा बुद्धको आधिकारिक आदेशको रूपमा कार्य गर्दछ । अनुसासनको उल्लंघनहरुसंग र विभिन्न प्रकारको अवरोधहरुसङ तथा असन्तोषको प्रकृतिसंग चेतावनीको रूपमा यी नियमहरुले व्यबहार गर्दछन । यिनै नियमहरुको ब्यबस्थित रूपमा संग्रह गरि राखेको पिटकलाई “बिनय पिटक” भनिन्छ ।
(ख) सात प्रकारको उल्लंघनहरु अथवा असन्तोष, आपत्ति :-
बुद्धले सबैभन्दा पहिला लागू गरेको अनुसासनको नियमहरुलाई मुलपञ्ञती ( मुल नियमहरु ) भनिन्छ । ती नियमहरुलाई पछी गएर अनुपञ्ञतिको रूपमा चिनिन थालियो । साथै यी नियमहरु, सिक्खापदहरु, अनुसासनका नियमहरुको रूपमा पनि लिन थालियो । यी नियमहरु उल्लंघन गरे अनुरुप दोषि भिक्षुले दण्ड बेहोर्ने कार्यलाई आपत्ति भनिन्छ । जस्को अर्थ “पुगिरहेको” हुन्छ ।
आक्रमक कारबाहीको लागि लागू गरेको सजायहरुलाई स्वाभव वा प्रकृति अनुसार सात प्रकारमा बिभाजन गर्न सकिन्छ । ती हुन:-
(१) पाराजिका (२) संघादिसेष (३) थुल्लच्चय (४) पाचित्तिय (५) पाटिदेसनिय (६) दुक्कत (७) दुब्भासित
क्रमशः !! – धेरै दिन अघि एक मित्रले त्रिपिटकमा भएको बौद्ध शिक्षा यो पेजमा लेख्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । उहाँको आग्रहलाई स्विकार्दै हामीले केही त्रिपिटकका ज्ञान साभार गर्ने जमर्को गरेको छौ । पुस्तक :- त्रिपिटक प्रवेश, अनुबाद तथा सग्रह:- बासुदेब देसार र कोबिद ।
Previous articleयी हुन् कहिले पनि प्रेममा धोका नदिने ५ राशिका युवतीहरु, जानी राखौं पुरा पढ्नुस्…
Next articleहरेक विहान यस्तोगर्नुहोस् तपाइँसँग पैसाको कमी हुनेछैन